धेरै नराम्रो सन्देश गयो भनेको छु « Jana Aastha News Online
धेरै नराम्रो सन्देश गयो भनेको छु
टंकमणि शर्मा (दंगाल),महालेखा परीक्षक
खोटाङ जिल्लाको भगवती माध्यमिक विद्यालय(साविक मिडिल स्कुल)मा अध्ययन गरेका ६ भाइ नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) बन्न सफल भए । जसमध्ये टंकमणि शर्मा, उत्तमकुमार भट्टराई, केशव भट्टराई, मणिराम ओझा, घनानाथ ओझा रिटायर्ड भए । सुरेश आचार्य अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
टंकमणि अवकाशपछि ०७४ जेठ ८ गते महालेखापरीक्षकमा नियुक्त भए, ६ वर्षे कार्यकालका लागि । हालै उनले आफ्नो कार्यकालको चौथौँ (५८औं ) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । जहाँ ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजुको हिसाब किताब सार्वजनिक भएको छ । जागिरे जीवनको लामो कालखण्डमा अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका, आन्तरिक राजश्व, भन्सार, राजश्व अनुसन्धान विभाग चलाएका र सचिव बनेसँगै सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काम गरेका उनले व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह (एमबिए)सम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
– ०७६/७७ मा ५ हजार ४६२ वटा कार्यालयको लेखा परीक्षण गरेका थियौँ । ५३ खर्ब २७ अर्बको परीक्षण भएकामा १ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु निस्कियो । संघीय मन्त्रालय ३ हजार ७९, प्रदेश मन्त्रालय र इकाइ १ हजार १९ र स्थानीय निकाय ६ सय ९९ वटा, समिति र अन्य संस्था ५ सय ८४ र संगठित संस्था ८१ वटाको लेखापरीक्षण गरिँदा संगठित संस्थाबाहेकको बेरुजु १ खर्ब ४ अर्ब आएको छ ।
०५९/६० देखि अघिको राफसाफ भएको छ । त्यसयता अहिलेसम्मकै कूल बेरुजु निकाल्दा,४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडको बेरुजु कायम भएको छ । टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ अर्ब ५८ अर्ब हाराहारी छ । जसमा लेखापरीक्षण बक्यौता १८ अर्ब छ । राजश्व बक्यौता (कर निर्धारण भएको, राजश्व निर्धारण भएको तर असुल हुन नसकेको) २ खर्ब १६ अर्ब छ । शोधभर्ना लिन बाँकी १४ अर्ब हाराहारी, जमानत बसेर दिएको, ऋणको भाका नाघेको २ अर्बजति छ । यो २ खर्ब ५८ अर्ब बेरुजुमध्ये कति अडिट भएको, कति अडिट हुन बाँकी र फस्र्याेट गर्न नपर्ने छन् । यी सबै हिसाब हेर्ने हो भने ६ खर्ब ७६ अर्ब रकम ०७६÷७७ सम्म बेरुजु र टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो चार वर्षको बेरुजुको भ्योल्युम कस्तो पाइयो ?
– संघीय सरकारको कारोबार घटेको छ । ०७६÷७७ मा १५ खर्ब ५६ अर्ब, ०७५/७६ मा १७ खर्ब ५६ अर्ब, ०७४/७५ मा २० खर्ब ८ अर्ब रहेछ । संघीय सरकारको खर्च ४ खर्ब ५२ अर्बले घटेको छ । १० वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भने कारोबारको ४ देखि ५ प्रतिशत बेरुजु पाइयो ।
म आएको वर्ष ७ दशमलव ४१ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५ दशमलव २९, तेस्रो वर्ष ४ दशमलव ०५ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ दशमलव ८६ प्रतिशत देखिएको छ । प्रदेश सरकारको पछिल्लो तीन वर्षमा खर्च झण्डै २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा झण्डै ४६ प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो तीन वर्ष त्यहाँ २ सय ९२ अर्ब बढी रकम परिचालन भएको छ । स्थानीय तहमा अलि बढि अनियमितता भएको देखिन्छ ।
लेखापरीक्षणको कूल रकमको झण्डै ५ प्रतिशत बेरुजु निस्कनु कत्तिको अत्यासलाग्दो स्थिति हो ?
– एउटा सैद्धान्तिक बेरुजु हुन्छ, जो अंकमा गनिएको हुँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ लाख ८ हजार केस हेरेकोमध्ये ६९ हजार इस्यु (टिप्पणी) नीति, विधि, सिद्धान्त, ऐन, नियमको परिपालना, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, सैद्धान्तिक र नीतिगत छन् । बाँकी ३९ हजार केस बेरुजुको अंकमा लागत भनेर कायम गरिएको छ ।
१ खर्ब ४ अर्ब बेरुजु त्यही ३९ हजार केसबाट निस्किएको हो । बाँकी ६९ हजार केस हेर्दा प्रणाली र पद्धतिमा वर्षाैंदेखि असर पार्दै आएको छ । विगतमा असुल गर्नुपर्ने भनेर टोटल फिगरको १८ देखि २० प्रतिशत आउँथ्यो । यसपटक २६ प्रतिशत छ । नियमित गर्नुपर्ने झण्डै ६० प्रतिशत देखिएको छ त्यो भनेको अडिटर ढोका वा अफिसमै पुगेर अडिट गर्दासमेत लेखा श्रेस्ता पेश नभएको, प्रमाण, कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नदिएको विषय हो । यो विषयभित्र छिरेर कागजपत्र हेर्दा भोलि असुलउपर वा नियमित गर्नपर्ने वा शंकास्पद कारोबार भेटिन सक्छ ।
यसपटकको प्रतिवेदन केलाउँदा ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजु देखियो । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु पौने सात खर्ब भनिएको छ । सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन पनि भनिन्छ । उसो हो भने, कस्तो खालको बेरुजुलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भनेर बुझ्ने ?
– सरकारको बजेट हिनामिना, नगद फस्र्याेट, राजश्व असुल गरी बैंकमा दाखिला नभएको, नियतसंगत ढंगले राज्यलाई नोक्सानी पार्ने कुनै कार्य भएको देखिए त्यसलाई भ्रष्टाचारको रुपमा लिन सकिन्छ । गलत मनशायले कुनै खरिद गरेको होस् वा भुक्तानी भएको होस्, राजश्व छोडिएकोजस्ता विषयलाई भ्रष्टाचारजन्य वा शंकास्पद कारोवारको रुपमा लिन्छौं ।
असुल गर्ने भनिएको सबै रकम भ्रष्टाचार होइन । नियमित गर्ने भनेर ६० प्रतिशत लेखिएको छ । त्यसभित्र केही मिथ्या पनि हुन सक्छ । पौने सात खर्ब कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसभित्र २ खर्ब ५८ अर्बमध्ये १८ अर्ब अडिट गर्न बाँकी छ । सोबाहेकको राजश्व असुली नभएको, सोधभर्ना नलिएको देखिएको छ । रिपोर्टमै हिनामिना र फस्र्योटसम्बन्धी विषयलाई क्याटागोरी गरेर लेखिदिएका हुन्छौं ।
के कारणले यो आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब अडिट हुन सकेन ?
तपाईंहरूकै प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब १६ अर्ब राजश्व बक्यौता देखिन्छ । यो प्रकरणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत मुछिएका छन् । यस्तो कार्य कसरी भइरहेको छ ?
महालेखाको रिपोर्ट अलि अमूर्त हुन्छ । कसलाई कारबाही गर्ने, किन गर्ने ? केही खुलाइएको हुँदैन । किन ?
– सैद्धान्तिक, नीतिगत, प्रणालीगत हिसाबले हेर्छौं । कतिपय कुरामा अनुसन्धान, विश्लेषणको काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हाम्रो कोणबाट हेर्दा अनियमितता भइसकेको हो कि ? भन्ने प्रकारका केस देखिन्छन् । जसलाई इण्डिकेटिभ हिसाबले गरिसकेपछि बाँकी छानबिन हुन्छ ।
तपाईं महालेखापरीक्षक बनेसँगै बेरुजुका मुख्य जिम्मेवार अधिकारी (बेरुजुबहादुर)हरूको नामै सार्वजनिक गर्न थाल्नुभयो । यसले यो प्रणालीमा केही सुधार आएको छ ?
– सबै सरकारी निकायको परीक्षण हामीले गर्ने भएको हुँदा उहाँहरूको कामको वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकन एकपटक गरौं भन्ने लागेर सबै कार्यालयको मूल्यांकन गर्न खोजेको हो । धेरै ठाउँबाट सूचना आएन । हामीसँग कुन–कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु छ, त्यहाँको कार्यालय प्रमुख को को बन्नुभयो ? सबैको लेखा उत्तरदायीचाहिँ मन्त्रालयको सचिवलाई मानिन्छ ।
राज्यको ढुकुटी सुरक्षित तवरले परिचालन गर्छ भन्ने देखिएको खण्डमा मात्र उसलाई जिम्मेवारी दिने, शंकास्पद देखिएको खण्डमा जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भन्ने कुरा राखेको छु । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था यही आधारमा गरिने, वृत्ति विकासको विषयसँग समावेश गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेको छु । प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि बेरुजु फस्र्याेटको लागि ताकेता गर्ने सोच बनाएको छु ।
– विद्युतीय माध्यमबाटै अडिट गर्न सक्ने सिष्टम बनाइएको थियो । कोभिडका कारण सबै सफ्टवेयर टेष्ट भइनसकेका कारण अघिल्लो वर्ष अघि बढ्न सकेन । पहाड र हिमालका ३३ वटा जिल्लामा म्यानुअल्ली हुन्छन् । तीबाहेकका जिल्लामा अनलाइनबाटै पेपरलेस अडिटमा जाँदै छौँ यही आर्थिक वर्षबाटै । अब हामी एउटा जोखिमका आधार र अर्काे पेपरलेश अडिटमा जान्छौं ।